Ukubuyekezwa kukaRyse: Indodana yaseRoma | Izindaba zamagajethi
Ukuthuthukiswa kwalokhu Ryse Sekudlule ezigabeni ezahlukahlukene, okungaphezulu kwalokho, ngisho nangokududuza okubili nangemiqondo ehluke kakhulu. Ekuqaleni, kwakuwumsebenzi okuhloswe ngawo Xbox 360 obekuhloswe ngalo ukukhombisa lokho Kinect ingabamba ngaphezu kwemidlalo yokhiye ophansi noma izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile. Noma kunjalo, Crytek y Microsoft babenobuhlakani bokubamba uhlelo.
Futhi yilokho manje, URyse: INdodana yaseRoma, ifika njengengxenye yomugqa wokuqala we Xbox One, iguqulwe yaba yi-beat'em eluhlaza futhi lokho kuyamangaza esigabeni esibonisa, ngaphandle kokungabaza, umdlalo omibalabala kunayo yonke i-console entsha Microsoft.
Ngokuphikisana, Ryse usingenisa esikhunjeni sesosha laseRoma, UMarius titus, ofunge ukuvikela uMbuso kusongo lwabezizwe. Kepha ngeke kube lula: izingxabano zomuntu siqu kanye nokuwohloka koMbuso uqobo, okubolile ngenkohlakalo enobuthi, kuzoba izithako eziyoqedela ukunonga indaba engeke neze ikwenze udlidliziswe yimizwa futhi esebenza njengezaba kuTitus ezamehlela eRoma.naseBritannia - nakulabo abakhanyiselwe Emlandweni, bakwazisa ukuthi asihlangani namaqiniso abhalwe kahle.
Ngokuqondene nemishini yomdlalo, iyi- simpleton futhi beat'em ezivamile up lapho kuzodingeka sibhekane nezimo futhiilayini ngokweqile futhi inento ecishe ingabi zero yokuhlolaNjengoba sidlula phakathi kwamagagasi amaqaba aphuma ezosihlangabeza, enezigcawu zakudala esingazilindela kusimo ngalesi sikhathi esithile: kuzoba nokuvinjezelwa noma ukwakheka kofudu bakudala.
Izilawuli ziqonde ngqo. Engxenyeni ehlaselayo sinenkinobho yokuhlasela ngesikhali esihlomile, kanti enye izosivumela ukuthi siphule ukuqapha kwesitha. Ngeshwa, ama-combos achazwe ngaphambilini ayindlala futhi isikhathi esiningi sizozikhawulela ekuchotsheni inkinobho yokuhlasela ifaka phakathi lowo ozogada lapho siwudinga. Engxenyeni yokuzivikela sinamathuba amabili: sebenzisa ihawu noma i-dodge, eyokugcina iyona enconywe kakhulu, ngoba amabanga amahle ayagcinwa futhi IA yesitha kulindeleke kakhulu.
Elinye lamaphuzu agxekwe kakhulu womdlalo ekubukeni kuqala komdlalo emicimbini lapho ungadlalwa khona, ukuhlukunyezwa QTE. Lokhu kungenziwa lapho izitha zibuthakathaka: ngaleso sikhathi, lapho kusebenze i- QTE Kufanele silandele imiyalo ekhonjiswe esikrinini, kepha qaphela, akunandaba ukuthi sishaya noma siphuthelwa, ngoba ukubulawa kwenziwa njalo, ngaphandle kokuthola amaphuzu aphansi noma aphezulu. Ezimweni ezimbalwa zokuqala, kuzoba yinjabulo ukuziphindaphinda ngesihluku sezigcawu, kepha lapho besibona into efanayo ncamashi amahora ambalwa futhi sibekezelela izindimbane zezitha -ezikhona futhi ukuhluka okuncane-, i- I-QTE igcina iba yisicefe.
Ngokobuchwepheshe, ngaphandle kombuzo wanoma yiluphi uhlobo, lokhu I-Ryse: Indodana yaseRoma iyinhlangano ebukeka kahle kakhulu ku-Xbox One ekuqaleni kwakhe emhlabeni. Sinezimo eziphindwe kahle kakhulu, izinhlamvu eziningi esibukweni, imiphumela ekhanyayo nezinhlayiya iyamangaza, ukugqwayiza kobuso kuyakholisa futhi izimpi ziphumelele impela. Kodwa-ke, kufanele kucatshangwe ukuthi ukuthungwa okuthile kungashayisana nokunye, isinambuzane esithile esijwayelekile semizimba entantayo noma ukuthi umdlalo ugijimela 900p, ukugcina okumbalwa I-30 fps esitebeleni esikhathini esiningi. Ngiphinde ngaphuthelwa yimininingwane efana nomonakalo kanye namachaphaza egazi ezingutsheni zempi.
Enye yamaphuzu amnyama wohlelo eyayo isikhathi esifushane kumodi yomkhankaso, Ezinzipho amahora amahlanu ukuqedela Iziqephu eziyi-8 okwakhiwa ngalo. Futhi kungumsebenzi, ngoba indlela yabadlali abaningi Ngempela ayibambeki ngenxa yobulula bayo nokuntuleka kwezisusa zokuphonsa ngaphezu kwemidlalo efanelekile ukuze ibone ukuthi amandla omdlalo empeleni alele kwimodi yomkhankaso, ngeshwa futhi njengoba ngishilo, mfushane.
Isihloko sezithangami esisho lokho Crytek Ovelele kwezobuchwepheshe kepha akakwazi ukubhekana nemishini yokuqina ye-gameplay, uzenza umuntu kulokhu URyse: INdodana yaseRoma. Ngokuphikisana, ayinazo izikhathi zomvuthwandaba weqiniso, igeyimu ilula futhi iyaphindeka, amahora amahlanu omkhankaso ambalwa futhi imodi yabadlali abaningi inokubonakala okungajwayelekile. Olunye uhlangothi lwemali luyisigaba sokuqhafaza esimaka ngempela ukweqa kokukhiqiza futhi kuyisampula sokuqala salokho imishini emisha okufanele izinikeze yona ngokuzayo.
Ukukhiqizwa kwalolu hlobo kufanele ngabe kuyinakekele kakhulu i-gameplay yayo. Njengayo yonke eminye imidlalo Xbox One ukuthi ngibe nethuba lokuhlaziya, nginomuzwa wokuthi lezi yizinhlelo ezithathe isikhathi esiningi ukuqeda ukupholisha. Ngaphandle kokudlula ehlathini, ngingancoma kuphela URyse: INdodana yaseRoma kulabo abakwazi ukungawanaki amathuba adlalwayo anqunyelwe nesikhathi esifushane, nakubo bonke abanye abadlali, ubaxwayise ngokuthi umdlalo wegeyimu, ubude besikhathi kanye nemidwebo engakahlanganiswa kahle.
QAPHELA OKUGCINA UMVJ 5.5
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Ukuhlaziywa kweRyse: iNdodana yaseRoma
Yenza umbhalo wokukhuluma uye embhalweni nge-talktyper